ကဒါဖီ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိစွာ ထွက်ခွာခွင့် အဆိုကို သဘောထားတင်းမာ သည့် လက်နက်စွဲကိုင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတို့ ပယ်ချ | Freedom News Group
ကဒါဖီ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိစွာ ထွက်ခွာခွင့် အဆိုကို သဘောထားတင်းမာ သည့် လက်နက်စွဲကိုင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတို့ ပယ်ချ
by FNG on March 8, 2011	Rebels Reject Gaddafi Resignation Meeting Offer
၏ ထက်ဝန်ခန့် ကို ထိန်းချုပ် ထားသည့် လစ်ဗျား သူပုန် များ က ယနေ့ ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
မြောက်အတ္တလန်တစ် စစ်စာချုပ် အဖွဲ့နေတိုး ၏ တိုက် ခိုက်ရေး လေယာဉ်များ က ယနေ့ 
လစ်ဗျား နိုင်ငံ ကောင်းကင်ယံ တွင် စတင် ၀ဲပျံ နေ ချိန် ဉ် နိုင်ငံ အာဏာ ကို ၄၁ နှစ်ကြာထိန်း
ချုပ် ထား ခဲ့သည့် ကဒါဖီ က ယခု ကဲ့ သို့ တောင်းဆို လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘာမား က နေတိုး နိုင်ငံစုံ တပ် ဖွဲ့ အနေ ဖြင့် ပိုမိုထိရောက်သည့် စစ်ရေး
လှုံဆော်မှု များ ကို ပြုလုပ်ရန် စဉ်စားထားပြီး ကဒါဖီ ကို ထောက် ခံသည့် အင်အား စုများ ကို လည်း
ရီပတ်ဘလီကန် လွှတ်တော် အမတ် များဖြစ်သည့် ဂျွန်မက်ကိန်း နှင့် မစ်ခ်ျ မက်ကော်နယ်တို့ က
လစ်ဗျား နိုင်ငံ ကို စစ်ရေး အရ ၀င်ရောက် စွက်ဖက် ရန် တိုက် တွန်းထားသည်။
လူထု အုံကြွမှု အား ကဒါဖီက ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်မှု ကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ နှစ်ထောင်
ကျော် သေဆုံး ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။လစ်ဗျား နိုင် ငံခြား ရေးဝန် ကြီး ကမူ လက်နက် ကိုင် သူပုန်များ
မှာ အယ်ခိုင်ဒါ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ မှ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားသူများ ဖြစ်သည် ဟု စွပ်ဆွဲထား
Date of birth: June 7, 1942
Profession: Politician, Army officer, Dictator
Works written: Escape to Hell, The Green Book
Offices held: Prime minister, Dictator, Head of…
Children: Al-Saadi Qadhafi, Saif al-Islam Qaddafi,…
Why the US must intervene in Libya (rationalactors.com)
New Republic: Four Options For Action In Libya (npr.org)
Tags: Barack Obama, Egypt, Libya, Muammar al-Gaddafi, No-fly zone	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← လစ်ဗျား ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ အလှည့်လဲ
နိုင်ငံတွင်း ဆန်ပြတ်လပ်မှု များ ဖြစ်ပေါ်နေ →
ko maung	#
(လက်နက်ဆွဲကိုင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူဆိုပါလား ဟီးဟီး.. ရေးလဲရေးတက်တဲ့ post တင်တဲ့သူရယ်.. :D)
March 11, 2011	RedCloud	#
ဥာဏ်လေး မတောက်တခေါက်နဲ့။ လစ်ဗျားနောက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ ဗီတိုအာဏာသုံးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံအားလုံးက အရေးယူဖို့ သဘောတူတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်သူတွေက ထကန့်ကွက်လဲ…သိလား။ မသိရင် စုံစမ်း..
March 11, 2011	လူအေး	#
မပေးနဲ့။ စစ်ခုံရုံးကို တင်။ သူ့အပြစ်အတိုင်း သူပေးဆပ်။ တရားမျှမျှတတပေးဆပ်။ ပြောတော့ နောက်ဆုံးသွေးတစက်ကျန်တဲ့အထိ တိုက်မယ်တို့၊ လူထုက သူ့ကို ချစ်တယ်ဆို။ လေသံကတော့ သန်းရွှေအတိုင်းဘဲ။ ဘယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုမှ တိုင်းပြည်အပြင်ထွက်ခွင့်မပေးနဲ့။ ဘယ်သူမှ အရှင်မထွက်စေနဲ့။ ပြောတော့ ပြည်ပအားကိုး ပုစိန်ရိုးတဲ့။စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင်က တရုတ်အားကိုးနဲ့ ရမ်းကားနေတာ။ ဘာသာမဲ့၊ အကြင်နာခေါင်းပါး၊ သတိတရားမရှိတဲ့ အစိုးရနဲ့ ဇာတ်သိမ်းကတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမယ် . . .
March 10, 2011	Nyein Moe	#
I know who are always reject at UN , but think about it, in 1990′s after election , which country are come and congratulated to NLD. They are always watching to the world politics and if they see power change opposite site , policy will change as soon as possible , but , I still respect u, because of u r ( Tha khinapaw thitsar shi tae/ ) follower, that why.
March 9, 2011	ချိန်တန်ပြီ	#
ီDon’t depend on other country. At the first we must know the main fact that we must do our self.
March 8, 2011	Nyein Moe	#
U Than Shwe, U will be meet that kind of situations soon. Who like to follow him!
March 8, 2011	snake	#
March 8, 2011	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,519,481 hits
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearMyanmar's president calls for more investment, development aid from PhilippinesUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar off to perfect start in SEA GamesMyanmar refugees face land challenges on returnMyanmar President cites Pinoy resiliencyUS seeks greater Myanmar military trainingWant Burma info in your inbox each morning?